हाईपर फन्ड डुब्ने हल्लाले बजार पिट्यो,आखिर के भएको हो? (पुरा पढौँ) – Korea Pati
December 1, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on हाईपर फन्ड डुब्ने हल्लाले बजार पिट्यो,आखिर के भएको हो? (पुरा पढौँ)
धेरै नेपालीहरुले आफ्नो लगानी लगाएको ने’टवर्कि’ङ शैलीको ‘हाइपर फन्ड’ भनिने भर्चुअल लगानीको प्लेटफर्म अहिले डु’ब्यो भन्ने ह’ल्लाले बजार तातिएको छ। लगानी गरिसकेका, गर्न खुट्टा उचालेका र लगानी गरेर धेरथोर प्रतिफल चाखिसकेकाहरू हाइपर फन्डमा मात्रै आ’कर्षि’त छैनन यस्तै भर्चुअलशैलीका जोसि’यल, सोले म्याक्स, क्राउड वान, सीआरयू, विन्टर जस्ता दर्जन भन्दा बढी प्लेटफर्मतर्फ ता’निइरहेका छन् । पछिल्लो समय अन्य प्लेटफर्मभन्दा हाइपर फन्डमा आ’क’र्षित हुने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ ड’लरमा लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नेपालभित्रै र प्रवासमा रहेका नेपालीमाझ यसको आ’क’र्षण बढ्दो छ ।
केहि समययता हाइपर फण्डको अफिसियल साइट नखुल्ने गरेको, एमओएफ हराएको, एमओएफ एक्सचेन्ज गर्ने अप्सन नदेखिएको हुँदा यसमा लाखौं पैसा लगानी गरेकाहरु आ’त्तिएका छन। तर हाइपर फण्डमा लामो समयदेखि लगानी गरि काम गरिरहेका टिम लिडर भनिनेहरुका अनुसार अहिले हाइपर फण्डले विभिन्न किसिमका अपडेटहरु गरिरहेको र उक्त अपडेट गर्ने कामका लागि सेवा अ’वरु’ध्द भएको जानकारी दिएका छन। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुले अनेकन भर्चुअल ने’टव’र्कमा डलरमा लगानी गरिरहेका कुरा सुन्नमा आउँदछन।
इजरायल र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली र नेपालभित्रकै सयौंले यसमा लगानी गर्दै आइरहेका छन। त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरु अझ इपिएस मार्फत काम गर्न कोरिया गएका धेरै नेपालीहरुले लाखौ रुपैयाँ यसमा लगाएको बुझिन आएको छ। नेपालभित्रकै केहीले मनग्गे मुनाफाको लो’भमा घरजग्गा बैंकमा धितो राखेरसमेत यस्ता भर्चुअल नेटवर्कमा डलरमा लगानी गरिरहेका छन। मौखिक र भर्चुअल रूपमा एकले अर्कोलाई फ’सा’उँदै सदस्य बढाउने क्रम व्यापक देखिएको छ।
धेरैजसो देशका बैंकमा सिधै रकम पठाउन सकिने सुविधा भएकाले कतार र दुबई लगायतका खाडी देशका नेपाली कामदार पनि यसमा आ’कर्षि’त भइरहेका छन। मुनाफाको कुनै का’नु’नी ग्यारेन्टी नभएको यस्तो अवै’ध खेलमा धेरै नेपाली फ’स्ने जो’खि’म देखिन्छ। नेपालभित्रै लगानी केन्द्रित नहुने, कार्यालयको कुनै भौतिक उपस्थिति नहुने र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन अनेक छिद्र खोज्नुपर्ने भए पनि यस्ता भर्चुअल प्लेटफर्म मा लगानी बढाउन दैनिक कैयौं जुम,टेलिग्राम, ह्वाट्स एप र म्यासेन्जर ग्रुपमा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
बेलायत, पोर्चुगल, दक्षिण कोरियादेखि नेपाली कामदारको ठूलो संख्या रहेको खाडीका देश र मलेसियामा रहेका नेपाली यस्ता मिटिङमा सहभागी भएको देखिन्छ । नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार र नेपालभित्रबाट अनुमति नलिई डलरमा लगानी गर्नु गै’रका’नुनी काम हो। विगतमा पनि ने’टवर्कि’ङ शैलीमा यस्ता कारोबार भएका थिए । स्वदेश वा विदेशमा हुने त्यस्ता कारोबार अ’वै’ध हुन्। डलर देशका लागि भ्यालुएबल कुरा हो । कसैले डलर विदेश पठाएको मात्रै थाहा भयो भने पनि कारबाही हुने राष्ट्र बैंक श्रोत बताउँदछ।ईपिएस साथीबाट